मोरङमा खसीको यो कस्तो चमत्कार ! पुराण सुन्ने देखी मलामी जाने सम्म !! – Ekathmandunepal
Homeपत्याउनै गाह्रोमोरङमा खसीको यो कस्तो चमत्कार ! पुराण सुन्ने देखी मलामी जाने सम्म !!
२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार १२:१३ ekathmandu Nepal पत्याउनै गाह्रो 0
उर्लाबारी । खसीले चमात्कारिक ब्यबहार प्रदर्शन गर्न थालेपछि मोरङको शिसवनी –१का बिनोदकुमार महतोेले ५ वर्ष देखि शौखको रुपमा खसी पालिरहेका छन् । खसीले गर्ने क्रियाकलापले जो कोहिलाई आचश्र्यचकित बनाउने गरेको छ ।
खसीले आश्र्चय चकित बनाएपछि स्थानीयवाशीले बाटोमा हिडँडुल गरेको भेटेमा खानेकुरा दिने र पुजाआजा समेत गर्ने गरेका छन् । बाटोमा बडेमानको खसी देखेपछि समाचार बनाउन लागेको समाचारदाता कत्रो ठुलो खसी भनेर समाचार बनाउने सुरमा थियो । तर यथार्थ अर्कै रहेछ गाउँमा कुनै धार्मिक कार्यक्रमको भक्ति संगीत सुन्नासाथ महतोको खसी कार्यक्रम स्थलतर्फ पुग्ने गर्छ ।
विराटनगर–रंगेली सडक खण्डको रामचौकमा रहेको महतोको पसलमा खुल्ला छोडिएको खसी ५ किलोमिटर वरपरका सबै धामिर्क अनुष्ठानहरुमा पुग्ने गरेको छिमेकी रामेश्वरदेव मण्डलले बताए । २०६४ सालमा सप्तरीको माहुलीबाट किनेर ल्याएको जमुनापारी जातको खसीले २०६८को चैत १३ देखि १८ सम्म आयोजित यज्ञमा पहलो पटक चमात्कारिक ब्यवहार देखायो ।
महतो भन्छन्–यज्ञ सुरु भए देखि अन्तिम दिनसम्म खसीले यज्ञस्थल छोडेन । यज्ञको विसर्जन गर्न नदी सम्मसँगै गयो । खसीले धार्मिक हाउभाउ देखाएपछि महतोकि आमाले खसी बिक्रि गर्न दिइनन् ।
दुई तीन पटक खसी बेच्ने जमर्काे गर्नु भएका महतो भन्छन्–‘२०६८ चैत २५ गते आमा बित्नुभयो । त्यो दिन पनि दाहसंस्कार गर्न खसी मलामीहरुको अघि–अघि लाग्यो । त्यसपछि महतोको समेत मन मष्तिष्क समेत फेरियो । जनावर हो ।तर, मानिसको भन्दा सब्य र संस्कार युक्त ब्यवहार गर्छ । त्यसैले बेच्ने निर्णय फिर्ता लिएँ,महतोले भने । २०६९को जेठमा पनि गाउँमा ठूलो यज्ञ भयो । त्यो यज्ञमा समेत खसीले यज्ञस्थल नछोडेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
सात वर्षको खसी हाल ९३ किलोको छ । छिमेकी गाविस नोचाका शैयद आलमले गत वर्षको रमजानमा खसीलाई १ लाख ५० रुपैयाँ दिएपनि खसी बिक्रि नगरेको महतोको भनाई छ । ठूलो खसी पालेर के गर्छस ? खसीले दाँई गर्दैन,गाडा र हलो तान्दैन भनेर धेरैले बेच्ने सल्लाह दिए । तर,पैसा भन्दा संस्कार र धर्म ठूलो भनेर खसी बेचेको छुइन–महतोले भने । अचेल खसीलाई देख्नसाथ तस्विर खिच्नेको कमि छैन् ।
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (65)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (62)
माइजु त कुकुरसँग मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो (50)
पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई (48)
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (38)
के खाँदा कोलेस्टेरोल घट्छ २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढौं (25)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (12)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,251)
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो योनी हुने महिलाले धेरै यौन… (2,783)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,314)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,290)
कक्षा १२ मा अध्ययनरत युवातीको गोप्य भिडियो लिक.घरमा… (2,184)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,154)